Marka dhalinyaradu buuxiyaan booskii Dowladdu banneysay | KEYDMEDIA ONLINE
Marka dhalinyaradu buuxiyaan booskii Dowladdu banneysay
Dhalinyaro ku sugan Magaalada Dhusamreeb ayaa si is-xilqaan ah u billaabay waajibaad ay gabtay Wasaaradda Waxbarashada ee Galmudug.
Dhuusamareeb Soomaaliya - Dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa billaabay in ay si iskood ah wax u baraan dadka reer miyaga ah ee degan baadiyaha dhow ee Magaalada.
Dhalinyaraadaan ayaa dadka reer guuraaga ah bara sida loo qoro loona aqriyo farta Soomaaliya, waxayna mashruuca ‘Baro Afkaada’ ka billaabeen dhowr tuulo oo hoos taga magaalo madaxda Gobolka Galgaduud ee Duusamareeb.
“Marka la eego sida ay baahida uga qabaan reer miyigu, barashada Af-Soomaaliga, lana fiiriyo sida ay usoo xaadirayaan xisadaha, lagu siinayo geedaha hoostooda, waxa ay bannaanka keeneysa fashilka Wasaaradaha Waxbarashada Soomaaliya iyo Galmudug oo dayacay dad u baahnaa in wax la baro”. Ayuu yiri bare ku sugan Dhuusamareeb.
Arrintaan ayaa noqoneysa irid cusub oo u furantay reer guuraaga, Wasaaradda Waxbarashada Galmudug iyo midda heer Fadaraal, ayaana dhalinyaradaan garab ku siin kara sii wadidda howshaan aan qarashka badan u baahnayn.